Firaisan-kina eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana : Notolorana mari-pankasitranana ireo Minsitra teo aloha
Published Date: 11 octobre 2021
Mitotaly 26 mianadahy ireo Minisitry ny Fitsarana na Sekreteram-panjakana miadidy ny Fitsarana teo aloha hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Voalohany teo amin’ny tantaran’ny Ministeran’ny Fitsarana, no misy fanehoana ny fankasitrahana ireo zoky ray aman-dreny teo aloha. Taorian’ny fananganan-tsaina androany Alatsinainy 11 Oktobra 2021 teto Faravohitra, dia nisy ny lanonana fanolorana mari-pankasitrahana ho azy ireo, na ireo izay nisolo tena azy ireo toy ny zanany, avy amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza.
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny solontenan’ireto Minisitry ny Fitsarana teo aloha ireto, dia ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) Andriamatoa RAKOTOARISOA Florent, dia nohamafisiny ny fahavononan’izy ireo hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny asam-pitsarana, hanolo-kevitra sy hanampy amin’ny ankapobeny.
Nitso-drano ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ankehitriny, nampahery hahavita be amin’ny adidy masina iantsorohany ihany koa, indrindra amin’ny ady atao amin’ny kolikoly. Fangatahana manokana avy amin’Andriamatoa RAKOTOARISOA Florent kosa ny famitan’ny Fitsarana ny asany momba ny raharaha famonoana ny Mpitsara REHAVANA Michel tany Toliara ny 9 Desambra 2011, mba hahitan’ny fianakaviany ny rariny.
Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, dia vonona hatrany ny tenany handray izay soso-kevitra sy fanampiana avy amin’ireo Minisitry ny Fitsarana teo alohany, mba hanatrarana ny tanjona iraisana, dia ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana.
← Fidinana ifotony : Hapetraka tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa
Hai-fitsipi-pitondran-tena sy hai-adidy: Vita sonia ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny MEDEM →